8 Common iPhone Headphone Dhibaatooyinka iyo Solutions
Maqaalkani waxa uu kasoo muuqday qaar ka mid ah dhibaatooyinka headphone aad caadi u ah in aad user iPhone ayaa ka fool ugu yaraan hal mar. Article waxa kale oo ku dul soo jeedinta xalka ugu fudud si kasta oo ka mid ah dhibaatooyinkan.
1. xayiran in hab Sameecadaha
Waa dhibaato caadi ah in ku dhowaad user kasta oo kale iPhone ayaa ka fool ugu yaraan hal mar. Sida muuqata, iPhone kuuma sheegi karo farqiga u dhexeeya habka caadiga ah iyo headphones mar aad uga jari headphones ka baqdin iyo Dicumintiyo software taas oo keenta in ay si aad ah iPhone in hab headphones ah. Isticmaalka headphones kale oo aan ahayn kuwa asalka ah in la yimid iPhone sidoo kale waxay sababi kartaa dhibaato this.
Xalka in dhibaatadan cabsi waa mid fudud. Qaad ka mid ah buro joogto ah dhegta sidoo kale loo yaqaan ah Q-tip. Waxaa Geli in Jack headphone ka dibna waan ka qaadaynaa. Ku celi hannaanka 7 ilaa 8 jeer oo xoogaa layaab, iPhone la xayiran doonaa hab headphone mar dambe.
Dirty natiijada Jack headphone in badan oo ka mid ah dhibaatooyinka audio la mid ah ka wada hadlay kor ku xusan. Waxa kale oo laga yaabaa in gab codka aad iPhone kaas oo noqon kara mid aad looga xumaado. Wasakh ayaa la carqaladeeyey howlaha shaqooyinka audio ee iPhone wuxuu noqon karaa mid Carro ama mararka qaarkood waxay noqon kartaa marada ama xitaa xoogaa yar yar oo warqad. Furaha xalinta dhibaatada si kastaba ha ahaatee, waa ay is dejiyaan. In badan oo naga mid ah qabaa in ay bartey Halaagsamay iPhone iyo ordaan garaash ee kuugu dhow ama dukaanka Apple, halka dhibaatada la xallin karaa ilbiriqsi gudahood guriga.
Isticmaal huufarka la tuubo ku rakiban yihiin iyo meel ka soo hor jeedda tuubadu in Jack codka ah iPhone. Waa Daar oo ha samayn inteeda kale. Haddii si kastaba ha ahaatee, nooca wasakh in aan ka soo adeeganeyno waa marada, isticmaali qaado ilkaha ah in si taxadar leh u xoqin ka mid ah Jack maqal.
3. Headphone Jack la Qoyaanka gudaha
Qoyaanka sababi karaan wax badan oo dhibaato ah ku xiran Jack audio korkiisa heerka content qoyaan. Laga soo bilaabo haya'ad Jack audio ficil aan waxtar lahayn inay kala carar Diintooda in shaqada audio, dhaawac kala duwan oo ka mid ah dhacdo in kale.
Isticmaal timo engejiye si ay u qalalaan ka soo qoyaan kasta gudaha Jack headphone ah adigoo qalajiyaha timaha midig ka soo horjeeda in ay.
4. buuxda Headphone Jack
Headphone buuxda ay sabab u tahay cillad software ah waxay noqon kartaa sabab u ah iyadoo la isticmaalayo headphones kale oo aan ahayn kuwa asalka ah halka mararka qaarkood laga yaabo inuu keenay. Dhibaatadaan waxay keeni kartaa awood la'aanta in ay maqlaan wax ku iPhone iyo sidoo kale guuldaradii in la maqlo codadka la isticmaalayo isu headphones ah.
Ku lifaaq iyo fullaacin aad headphones asalka ah in la yimid dhowr iPhone jeer. Waxay kaa caawin doonaan qalabka ay ogaadaan farqiga u dhexeeya habka caadiga ah iyo headphones oo waxay soo Bixi Iyadoo ee gobolka Jack headphone buuxda.
5. Dhibaatooyinka Volume ay sabab u tahay headphone Jack
Dhibaatooyin Volume tixraac awood la'aanta in ay maqlaan wax dhawaaqa ka hadla audio ee iPhone. Kuwaas oo ay inta badan sabab u kacayso ee marada jeebka gudaha Jack headphone ah. Commons Qaar ka mid ah calaamadaha dhibaatada waxaa ka mid ah awood la'aanta in ay ka maqashaan dhawaaqa click marka furo iPhone iyo aan awoodi waayay in uu ciyaaro music iyada oo ku hadla audio iwm
Laab ka soo baxay mid ka mid dhamaadka paperclip ah iyo u isticmaalaan in ay ku xoqin baxay marada ka gudaha headphones Jack. Isticmaal toosh goobjooga u marada ah si sax ah iyo in la hubiyo in aadan dhaawici mid ka mid ah qaybaha kale ee headphones Jack in geeddi-socodka.
6. nasashada ee music halka la headphones ciyaaro
Dhibaatadaan halkii caadiga ah waxaa sababa marka la isticmaalayo headphones xisbiga saddexaad. Tan waxa u sabab xaqiiqada ah in headphones dhinac saddexaad oo inta badan ay ku guuldareysato inay bixiyaan gacanta ku xirantaa baahan yahay Jack headphones inay si fiican u soo lifaaq. Tani waxa ay keentey in nasashada ee miyuusig kuwaas oo u muuqdaan in ay si fiican u noqday ka dib markii silig headphones 'la siiyo eegmo dabacsan, laakiin dhibaatada soo noqoto muddo ka dib.
Xalku waa sahlan yahay; ha isticmaalin headphones qayb saddexaad. Haddii aad bartey waxyeelo kuwa la timid aad iPhone, gadno kuwo cusub oo ka dukaanka Apple. Iibso kaliya Apple headphones la macmalay in ay isticmaalaan aad iPhone.
7. Siri joojiyeen si qalad ah halka headphones ku xirnayn
Tani waxay sidoo kale waa wax dhibaato ah u kacaya ay sabab u tahay isticmaalka headphones dhinac saddexaad oo la taam ah dabacsan bareesada headphones. Dhaqdhaqaaq kasta, in kiisaska noocaas ah ka dhigaysa Siri yimaadaan oo ay kala go'do wax kasta oo aad la ciyaari headphones ah.
Sidii hore loo sharxay, mobiilka iPhone ama u muuqdaan in ay si fiican u samayn la Apple headphones la macmalay. Sidaa darteed, waa inaad hubisaa inaad soo iibsato headphones Apple dhab ah haddii aad dhaawici ama waxaadna aamineysaa in kuwa la timid qalab aad.
8. Sound oo keliya mid ka mid dhamaadka headphones ka ciyaaro
Tani macnaheedu waxay noqon kartaa laba wax, sidoo kale headphones in aad isticmaalayso waa dhaawacan ama ay jirto xaddi badan oo ah wasakh gudaha headphones Jack. Ka dib wuxuu keenaa headphones u leedahay taam ah tabarta yar gudaha Jack Haddaba keentay in dhawaaqa ka ciyaaro mid ka mid dhamaadka headphones ah.
Baar Jack headphones ee nooca wasakh in sababaya mushkiladda isticmaalaya toosh. Markaasuu ku xidhan tahay nooca uus, sida boodh, marada ama gabal warqad, waxay isticmaalaan talaabooyinka u dhigma kor ku xusan in laga takhaluso waxaa ka mid ah.
> Resource > iPhone > 8 Common iPhone Headphone Dhibaatooyinka iyo Solutions